Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Allegiant dia nanambara ny filoha lefitra / mpanolo-tsaina zokiolona vaovao
Rob Goldberg dia nampiroborobo ny toeran'ny filoha lefitra / mpanolotsaina zokiny an'i Allegiant
Goldberg dia matihanina amin'ny lalàna momba ny fitantanam-bola sy ny fiarovana
Niditra tao amin'ny Allegiant i Goldberg tamin'ny taona 2017 taorian'ny naha mpanolotsaina tany ivelany azy nandritra ny 15 taona mahery
Goldberg dia manana traikefa ara-dalàna mihoatra ny 40 taona
Nanambara i Allegiant androany fa nasandratra ho amin'ny toeran'ny filoha lefitra ambony / mpanolotsaina zokiny i Rob Goldberg. Goldberg dia manam-pahaizana manokana momba ny lalàna momba ny fitantanam-bola sy ny fiarovana. Nanatevin-daharana an'i Allegiant izy tamin'ny 2017 tamin'ny naha filoha lefitra / mpanolotsaina zokiny azy taorian'ny naha mpanolotsaina ivelany azy ho an'ny orinasa nandritra ny 15 taona mahery. Izy koa dia sekretera an'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa.
"Rob nandritra ny am-polony taona niainany teo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina, natambatra tamin'ny fahaizany manokana momba ny lalàna fiarovana sy ny fifanakalozana ara-bola no nahatonga azy ho mpikambana sarobidy amin'ny ekipanay," hoy izy Allegiant Filoha John Redmond. "Ny asany dia nifandray tamin'ny fampandrosoana an'i Allegiant hatramin'ny fiandohan'ny taona 2000, ary ny fahaizany sy ny fitantanany dia hanohy hanompo tsara ny orinasa amin'ny alàlan'ny dingana fitomboana manaraka."
Goldberg dia manana traikefa ara-dalàna mihoatra ny 40 taona. Talohan'ny nidirany tao Allegiant dia mpiara-miombon'antoka aminy amin'ny orinasa mpisolovava Ellis Funk, PC, monina any Atlanta, Ga. Efa niasa tamin'ny orinasa Altman, Kritzer ary Levick, PC any Atlanta izy, teo aloha izay mpiara-miasa aminy ihany koa. Nandritra ny asany, Goldberg dia naka zotram-piaramanidina telo samihafa - Atlantika atsimo atsinanana Airlines tamin'ny 1982, ValuJet Airlines tamin'ny 1994, ary Allegiant Air tamin'ny 2006.
Nahazo diplaoma tao amin'ny University of Virginia School of Law sy Emory University Business School, Goldberg dia tafiditra tao amin'ny bara any Georgia, South Carolina ary Nevada.